FADEEXAD: Gabadh Jidhkeeda Ka Ganacsata Oo La Seexatay SADDEX Xiddigaha Oo Manchester United Ka Tirsan - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaFADEEXAD: Gabadh Jidhkeeda Ka Ganacsata Oo La Seexatay SADDEX Xiddigaha Oo Manchester United Ka Tirsan
FADEEXAD: Gabadh Jidhkeeda Ka Ganacsata Oo La Seexatay SADDEX Xiddigaha Oo Manchester United Ka Tirsan
Saddex ka mid ah ciyaartoyda Manchester United ayaa dhex fadhiya fadeexad aan hore nooceeda oo kale uga dhicin fagaareyaasha kubadda cagta, gaar ahaan kooxaha waaweyn.
Ciyaaryahannadan ayaa waxay la seexdeen gabadh caan ka ah aflaanta dhaqan-xumada ah, taas oo hadda bannaanka keentay warkan oo hadal-hayn badan ka abuuray warbaahinta Ingiriiska.
Shona River oo u dhalatay waddanka Hungry ayaa waxay sheegtay in ay xidhiidh la samaysay saddex ka mid ah ciyaartoyda horyaalka Premier League oo dhamaantood u ciyaara Manchester, kuwaas oo la sameeyey dhaqan-xumo aan la duubin sida ay samayso waqtiyada kale.
Gabadhan anshaxa xun ayaa waxay ka cabatay ciyaartoydan oo ay sheegtay in aanay siinin wax lacag ah markii ay dhaqan-xumada la sameeyeen, laakiin aanay marka horeba iyadu ka doonayn oo ay ogayd in ciyaartoyda caanka ah aanay wax lacag ah ku bixin marka ay dumarka la seexdaan.
Mid ka mid ah saddexdan ciyaartoy ayay gabadhani siisay 200 Euro oo ahayd casho Pizza ah oo uu sitay markii ay isasoo raaceen, laakiin intii ay wada joogeen ay cuneen, taas oo uu isagu ka dalbaday in lacagta ay u celiso markii ay hawshooda soo dhamaysteen.
Shona River oo waraysi bixisay ayaa tidhi: “Waxay kaa rajaynayaan in aad la joogo sababtoo ah iyagu waa caan, laakiin haddana kulama ballamayaan. Waxay doonayaan in sida hadhka/hooska oo kale aad ugu dhegganaato, sababtu waa in ay lacag badan haystaan, taasina kama dhigna in ay deeqsiyiin yihiin.”
Gabadhan dhaqan-xumada ku caan-baxday ayaa waxay soo qaaday mid ka mid ah saddexda ciyaartoy ee Manchester United ee ay xidhiidhka la yeelatay ee uu midkood lacagta Pizza-da ay cuneen ay dib ugu celisay, waxaanay tidhi: “Aniga ayaa weydiiyey, waxaanu yidhi, ‘waan ka xumahay, waxaan Pizza u dalbaday saaxiibbaday, waanan usoo qaaday sababtoo ah maan haysanin lacag kale.”
Mar la weydiiyey magaca ciyaartoygaas ayay Shona River si kooban u tidhi: “Wuxuu u ciyaaraa Man United! Haddii uu ahaan lahaa ciyaartoy Man City ah, aniga ayaaba u malayn lahaa (in aanu lacag haysan).”
Si kastaba, hadal-haynta ugu badan ayaa waxay hadda ka taagan tahay ciyaartoyda ay noqon karaan saddexdan laacib ee Manchester United, waxaanay baraha bulshada ay taageereyaashu marba ku qiyaasayaan ciyaaryahannada ay ka suurtowdo in ay ku lug yeeshaan dhaqan-xumadan.